Chaswitches - Atsofohy ny bokotra fanosehana namboarina nisoritra switch switch namboarina-switch Button switch metal switch Rotary switch tactile switch
Izahay dia manizingizina ny hitsaboana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa, mahafeno ny filan'ny mpanjifa ara-potoana, ary manome ny vokatra amin'ny kalitao, mikendry ny hanome safidy bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay.
CHA C3001 andian-dahatsoratra vita amin'ny Gold silica gel manazava jiro jiro
CHA vokatra vaovao C605-1L mini tactile switch jiro jiro manazava
CHA C601B andian-doko roa misy jiro jiro manazava
Andian-tsarimihetsika CHA C3026 Audio sy video console
CHA CTS(M)(J)(H)(U)-6 andian-tseza tsy azo tanterahina
CHA CTR-12 series square square dustproof tactile switch
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatra na pricelist anay, azafady mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatiny izahay 24 ORA.
Vondrona Chau-Hua (Hong Kong) miorina ao 2007, tany am-boalohany mba hikaroka, mivelatra sy manamboatra ny dip dip ary ny tactile switch, miitatra tsikelikely amin'ny fanodinam-pahefana tsy misy rano, ny switch LED hazavana. Mba hanatsarana ny kalitao sy ny serivisy, nanangana ny Chau-Hua Zhi Shuo Factory izahay(Dongguan) amin'ny 2016. amin'izao fotoana izao, Chau-Hua dia nampiroborobo ny fikarohana matihanina amin'ny famokarana ny jiro ambony kalitao nandritra ny taona maro.
Mandra-pahoviana no hitahiry ny terminal ao amin'ilay trano fanatobiana entana
Soso-kevitra fa azonao ampiasaina amin'ny fitsapana mandroboka mba hanamafisana: NO.1 Mametaka apetaka apetaka mivantana amin'ilay tongotra solder ary jereo ny vifotsy rehefa avy nandalo tao anaty lafaoro. Raha miempo ny vifotsy ary rakotra tsara amin'ny tongotra solder, voaporofo fa tsy lehibe ny olana. NO.2 Aroboka mivantana ao anaty lafaoro famonoana ny tongotra mpirotsaka (mampirehitra mialoha ny herinaratra mba hahatonga ny maripana firy hitsonika tanteraka eo ho eo 240 ℃) HO AN'NY 2-5 segondra, ary avy eo dia avoahy. Raha ny solder tongotra afaka solder, ho tsara izany. NO.3 Ny tongotra mifampikasoka dia tsy voaravaka na malalaka. Raha tsy misy ny fepetra amin'ireo fomba roa etsy ambony, ny diplaoman'ny fiovan'ny oksidasi…
CHA-namboarina tandindona LED tactile switch
Ny orinasanay dia mirotsaka amin'ny famokarana sy R & D ny switch miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny folo taona. Ho fanampin'ny vokatra mahazatra, azontsika atao ihany koa ny mamolavola vokatra vaovao bebe kokoa mifanaraka amin'ny tena ilain'ny mpanjifa. Ny lokon'ny tariby sy ny mariky ny satrony dia azo alain-tahaka Fitaovana LED Namboarina, Misy loko roa, miaraka amin'ny fiainana lava Ny ampahany amin'ny terminal famaranana dia azo ampiasaina amin'ny maha jumper lead, manamora ny famolavolana faritra. Fampiharana Fampitaovana vokatra ho an'ny mpanjifa Fitaovana fampitaovana amin'ny serasera
Mpamatsy China switch avo lenta